प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिनल्याण्ड’ हो ! - प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिनल्याण्ड’ हो !
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिनल्याण्ड’ हो !
२०७५, १५ चैत्र, 10:32:48 AM
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिनल्याण्ड’ भएको बताएका छन् । आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।
उनले तीन करोड नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले काम गरिरहेको भन्दै विदेशी लगानीका लागि व्यवसाय गर्ने वातावरणमा धेरै सुधार गरेको बताए। उनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व मात्रै नभई नीतिगत स्थायित्व पनि भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृद्धिबिना राजनीतिक परिवर्तन दीगो नहुने भन्दै सरकारले द्रूततर आर्थिक विकासमा जोड दिएको बताए। उनले नेपालले सन् २०२३ सम्ममा मध्य आय भएको मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अंकको आर्थिक बृद्धि गर्न सरकारलाई ५ वर्षभित्र ९८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै वैदेशिक लगानी आवश्यक परेको प्रष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कर र उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा स्वचालित बनाउने योजना बनाएको जानकारी दिए।
उनले लगानीको लागि नेपाल उदार देश भएको भन्दै सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी खुला गरेको बताए। उनले मापदण्ड पूरा गर्ने लगानीलाई कर छुटको प्रतिबद्धता कानुनमा उल्लेख भएको भन्दै लगानीकर्ताको लागि यो अवसर भएको बताए।